यस्तो रह्यो संस्कृति विद सत्यमोहन जोशीको सयौँ जन्मदिन (फोटो फिचर)
वैशाख ३०, काठमाडौं । संस्कृति विद सत्यमोहन जोशी १०० वर्षमा प्रवेशको अवसरमा जन्म शताब्दी महोत्सब ललितपुर महानगरपलिकाले विशेष कार्यक्रमको साथ सोमवार सम्पन्न गरेको छ । जोशीलाई रातो टिका र दुवोको माला लगाई दिएर वग्गीमा राखेर महानगर परिक्रमा गराइएको थियो । उनलाई पाटन दरबार स्क्वायरबाट बग्गीमा राखेर मंगलब...
वैशाख २८, काठमाडौं । चारैतिरबाट डाँडैडाँडाले घेरिएको काठमाडौं उपत्यका हेर्न आन्तरिकदेखि बाह्य पर्यटकहरू नगरकोट, फुल्चोकी, चन्द्रागिरी, शिवपुरी लगायतका विभिन्न थुम्कामा पुग्ने गर्छन् । शहरबाट नजिकै अर्को एउटा थुम्का पनि छ, जसको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्दैछौं । बतासको बेगसँगै फर्फराइरहेको चन्द्रसूर्य...
वैशाख १८, काठमाडौं (अस) । हरियाली दृष्यले आँखालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ भन्ने कुरा बेलाबेलामा तपाईले सुन्नुभएकै होला । काठमाडौंको भीडभाड र कोलाहलका बीचमा तपाई आफ्नै सुरमा यात्रा गरिरहँदा कतै हरियाली वातावरण देख्दा पक्कै पनि आनन्द महशुस हुँदो हो । काठमाडौंका विभिन्न सडकखण्डमा अहिले हरियाली अभियान स...
वैशाख १८, काठमाडौं । आज मे १ अर्थात् विश्व मजदुर दिवस । काठमाडौंको भृकुटीमण्डप परिसरमा १३० औं मे दिवस अर्थात् मजदुर दिवस धुमधामका साथ मनाइयो । सो अवसरमा विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि तथा ज्यामी मजदुरहरुले र्‍यालीमा सहभागिता जनाएका थिए । र्‍याली बाघबजार, पुतलीसडक हुँदै भृकुटीमण्डपमा पुगेर सभामा परिण...
वैशाख ११, काठमाडौं । झण्डै ४० वर्षभन्दा बढी समयसम्म सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालन गरिएको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गको नयाँ कालोपत्रे गर्ने कार्य तिब्र गतिमा अघि बढेको छ । सन् १९७५ ताका निर्माण गरिएको विमानस्थलको धावनमार्गको पिच पहिलोपटक पुरै फालेर नयाँ पिच गर्न काम भइरहेको छ । नयाँ प...
वैशाख ७, काठमाडौं (अस) । तपाईले काठमाडौंका धेरै सडकखण्डमा यात्रा गर्नुभएको होला । हामीले अहिले चर्चा गर्न लागेको सडकमा पनि तपाई धेरै पटक ओहोरदोहोर गर्नुभएको हुनसक्छ । बबरमहलबाट चाबहिलसम्म पुग्न तपाईलाई कति समय लाग्छ ? अधिकांशको जवाफ हुन्छ, ‘दूरी र जाममा भर पर्छ ।’ तर हामीले यहाँ चर्चा गरेको सडकखण्डब...
चैत २२, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा शुक्रवार परम्परागत घोडेजात्रा पर्व मनाइएको छ । घोडेजात्राका अवसरमा नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा अश्वकला, साइकल खेल, शारीरिक व्यायाम, युद्धकलालगायतको प्रदर्शन गरेको छ । नेपाली सेनाले घोडेजात्राका अवसरमा हरेक वर्ष सो स्थानमा अश्वकलाका विविध क्षेत्रलाई समाव...
बारा–पर्सामा हावाहुरीको वितण्डा, सहयोग संकलन र वितरणको क्रम जारी (फोटो फिचर)
चैत १८, काठमाडौं (अस) । आइतवार साँझ अचानक आएको हावाहुरीले बारा, पर्सालगायत आसपासको क्षेत्रमा ताण्डव मच्चायो । हावाहुरीका कारण २९ जनाले ज्यान गुमाए भने ६०० भन्दा बढी घाइते भए । आँधीबेहेरीले अधिकांश घर–टहरा उडाएको छ, हजारौं घरबारबिहीन बनेका छन्, अन्नपानी नष्ट भएका छन् । रुख र पोलहरु भाँचिएका छन्, सवार...
चैत १६, काठमाडौं (अस) । उपत्यका भित्रिने एक महत्वपूर्ण नाका चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक फराकिलो बनाउने भनेर भौतिक संरचना भत्काइएको ४ वर्ष नाघिसकेको छ । तर अहिलेसम्म सडक कालोपत्रे हुन सकेको छैन । दैनिक हजारौंको संख्यामा साना–ठूला सवारीसाधान गुड्ने यो सडकखण्डको छेउछाउ बस्ने सर्वसाधारण, व्यापारी, सडकमा या...
फूलैफूलले सजियो भृकुटीमण्डप ! तपाई कहिले जाने हेर्न ? (फोटो फिचर)
चैत ८, काठमाडौं (अस) । ‘स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि पुष्प व्यवसाय’ भन्ने नाराका साथ पुष्प मेला शुरु भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको ‘२२औं फ्लोरा एक्स्पो २०७५’ को कृषि तथा पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले उद्घाटन गरेकी हुन् । पुष्पजन्य वस्तुको प्रवर्द्धन, विस्तार...